Itti-gaafatamtoonni Sidaamaa Miidiyaa Neetwoork to'annoo jala oolfaman - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright FB SMN
Kaleessa galgala Hoji-gaggeessaafi Itti-aanaan Hoji-gaggeessaa Sidaamaa Miidiyaa Neetwoork (SMN) to'annaa jala oolfaman. Namoonni kun guyyaa kaleessaa jaarsolii biyyaa waliin walga'iitti osoo jiranii humnoonni nageenyaa dhufanii ta'atan jedhu Qindeessaan Oduufi Sagantaalee SMN Obbo Muluqan Birhaanuu BBC'tti himeera.
Hoji-gaggeessaan SMN Obbo Geetahun Degguyyeefi Itti-aanaan isaa Obbo Taarikuu Lammaa yeroo ta'annaa jala oolfaman, hojjetoonni miidiyaa kanaa biroon ammoo akka gara waajira isaaniitti hin seenne dhorkamuu isaanii ibseera.
Kaleessa ganama qaamoleen nagaanyaa gara waajira isaanii dhufuudhaan waardiyoota eegumsarra jiran furtuu waajira isaanii akka kennaniif gaafachuu isaanii kan ibsu Qindeessaan kun waardiyyoon furtuu waajiraa hin qabnu jechuudhaan ofirraa gaggeessaniiru jechuun dubbata.
Akka Obbo Muluqan jedhutti, alkan naannoo saatii afurii aanga'oonni godina Sidaamaa, jaarsoliifi Ejjettoon Waldaa Kiristaanaa Makkaane Yesuus Taabor jirutti walitti qabamanii yaada Boordii Filannoo fudhachuudhaaf ariyachaa wayita jiranitti ture kan humnoonni nageenyaa to'annaa jala oolchan.
Aanga'oonni kunneen dargaggoota kana waliin kan walga'ii kanarratti hirmaatan hirmaannaa Ejjettoo keessatti qabanirraa akka ta'e beekameera.
SMN seera qabeessaan beekamtii argatee kan hojii jalqabe ji'a Waxabajjii darbe yommuu ta'u hanga ammaatti tamsaasa yaaliirra jira.
Dhaabbanni miidiyaa kun sagantaawwan isaa kan tamsaasu waajira isaa Hawwaasaatti argamuufi waajira lamaffaa irraa tamsaasu Afrikaa Kibbaa Johaannis Bargitti argamurraa akka ta'e Qindeessaan Oduufi Sagantaawwanii Obbo Muluqan himaniiru.
Yeroo ammaa kanatti tamsaasni kamiyyu Hawwaasarraa darbaa kan hin jirre yommuu ta'u karaa waajira Afrikaa Kibbaa jiruun sagantaawwan TV qofaa akka dhiyaatan taasifameera jedhe.
Waa'ee namoota to'annaa jala oolfamaniiru jedhamanii kana sababii ittiin hidhamaniifi haala isaan keessa jiran gaafachuudhaaf aanga'oota Naannoo Kibbaafi magaalaa Hawwaasaa isaan ilaallata jenne yaaliin taasifne hin milkoofne.
Sidaamaa Miidiyaa Neetwoork dhalattoota Sidaamaa dayaasporaafi abbootii qabeenyaan TV hundeeffame yommuu ta'u dhaabbatichi hojjetoota deggersa kennan dabalatee namoota afurtama akka qabu ibsameera.